myanmar | Saturngod | Page 2
Tagu Firefox Addon
10 Replies တချို့တွေက Unicode သုံးတယ်။ တချို့တွေက ဇော်ဂျီသုံးတယ်။ facebook မှာ unicode နဲ့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်လို့ မရဘူး။ Unicode font မသွင်းချင်ဘူး။ သွင်းလိုက်ရင် အခြား font တွေပါ လွဲကုန်တယ်။ ဇော်ဂျီ မသွင်းချင်ဘူး။ unicode နဲ့ အဆင်ပြေတယ်။ စတဲ့ စတဲ့ ပြဿနာ ပေါင်းစုံ အတွက် တန်ခူးကို စမ်းရေးဖြစ်တာပါ။
တန်ခူးဆိုတာကတော့ Thant Thet ရဲ့ Myanmar Font Tagger ကို အခြေခံပြီး firefox addon အဖြစ်ပြောင်းလဲထားတာပါ။ တန်ခူးက အလိုအလျောက် ဇော်ဂျီ နဲ့ unicode ကို သိပါတယ်။ font သွင်းထားစရာ မလိုပဲ ဇော်ဂျီ ကော unicode ကော ဖတ်လို့ရအောင် ပြုပြင်ပေးပါတယ်။ English font တွေကို မထိခိုက်ပဲ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုသာ သွားရောက် ပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒီ feature က Myanmar Font Tagger ရဲ့ feature ပါ။ Tagu က font tagger ကို အနည်းငယ်လေး ပြင်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ font embed ကို ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ Firefox addon သွင်းပြီးတာနဲ့ restart ပြချစရာမလိုပဲ ချက်ခြင်း သုံးလို့ရပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged myanmar, Unicode, Zawgyi on September 19, 2012 by saturngod. Google Maps with unicode
1 Reply မြန်မာ Unicode ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Google Map မှာ လမ်းနာမည်တွေ ကို မြန်မာလို ရှာဖွေလို့ရနေပါပြီ။ auto complete မှာလည်း မြန်မာလို ပြပေးပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged google, map, myanmar, Unicode on September 17, 2012 by saturngod. ဝါသနာ
3 Replies အခုတလော COE အကြောင်းဆွေးနွေးတာကို ပုံမှန်မဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တာ်လေးကိုလည်း ဆွေးနွေးတာတွေ ကို သဘောကျတယ်။ သို့ပေမယ့် အချို့ ဆွေးနွေးချက်တွေက သွေဖယ်ပြီ အခြား အကြောင်းတွေ ရောက်တာလေးတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါကတော့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ကျွန်တော် ဘာကို သွားတွေ့သလဲ ဆိုတော့ တကယ်မလုပ်လို့ တကယ်မရတာ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်မရပဲ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေရတာတွေ အကြောင်းလေးတွေလည်း တွေ့လိုက်ရတယ်။ တကယ်တော့ တချို့တွေရဲ့ ဘဝက ရွေးချယ်စရာ မရှိလို့ပါ။ ဆေးကျောင်းတက်မယ်ဆိုပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက ရည်မှန်းထားပြီးတော့ ၁၀ တန်းမှာ အမှတ်လည်း ကပ်ပြီး ကျန်ခဲ့ရတာတွေ ယောက်ျားလေးထက် အမှတ်များပြီး မိန်းကလေးဖြစ်လို့ ကိုယ့် ၁၀ တန်း အမှတ်က ဝင်ခွင့် မရခဲ့တာတွေ ကြောင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ကို ရောက်လာတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တန်းတော့ ၁၀ တန်း အမှတ်ဆိုတာကြီးက ဘဝ တစ်ခုလုံးကို ဆုံးဖြတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာကတော့ သိပ်သဘောမကျလှဘူး။ ကျွန်တော် ၁၀ တန်းတုန်းက ဆေးကျောင်းမှ ဆေးကျောင်းဆိုပြီး စာအရမ်းကြိုးစားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ သို့ပေမယ့် စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့ အချိန်မှ ဖျားပြီး ထင်သလောက် အမှတ်မကောင်းလို့ ဆေးကျောင်း မဝင်ခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ၁၀တန်းကတည်း အမြဲတန်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးနေကျ စကား တစ်ခွန်းရှိတယ်။ ဘာလို့ ဘဝကြီး တစ်ခုလုံးက ဒီ ၁၀ တန်း အမှတ်ကို မှီခိုနေရတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့။ ဆေးကျောင်း ဒီနှစ် မဝင်လို့ နောက်တစ်နှစ် ဝင်ခွင့်ပြန်ဖြေခွင့်မရှိဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် အမှတ်လေး နည်းနည်း နည်းသွားတဲ့ အတွက် အခြားကျောင်း ရွေးခွင့်မရှိဘူးလား ပေါ့။ COE ပေါ်လာတာကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်။ COE အမှတ် မှီအောင် ကြိုးစားမှာပဲ။ အကြောင်းကြောင့် COE မခွင့်ခဲ့ရင်တော့ ပုံမှန် UCSx ကို တက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိလာလိမ့်မယ်။ Computer ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ဆေးကျောင်းကကော ဘာလို့ ဒီလို မရှိတာလဲမသိဘူး။ ၁၀ တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်း အချို့ ဆေးကျောင်းတက်ချင်ရဲ့နဲ့ မတက်ခဲ့ရပဲ UFL တို့ အခြား စိတ်မဝင်စားတဲ့ ကျောင်းတွေ တက်တာ ကို အားမလို အားမရဖြစ်ခဲ့တယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged myanmar, UCSY, ဘဝ on September 12, 2012 by saturngod. Ornagai For Android Alpha 3
1 Reply Changes:
- Fixed Text display
- Add Settings
- support search
- support result with zawgyi
- support History
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged Android, myanmar, ornagai on July 22, 2012 by saturngod. Ornagai Android Alpha 2
Leaveareply Changes:
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged Android, myanmar, ornagai on July 22, 2012 by saturngod. redirect mywebfonts.appspot.com
Leaveareply http://mywebfont.appspot.com/ ကို 301 redirect နဲ့ http://mmwebfont.comquas.com ကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ mywebfont ကို သုံးတဲ့ လူ ဘယ်လောက်များလဲတော့ မသိပါ။ mmwebfont ကို redirect လုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ out of quota ပြဿနာ ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ mywebfont ကိုပဲ သုံးသုံး mmwebfont ကိုပဲ သုံးသုံး အတူတူပါပဲ။
mywebfont မှာ google analytics ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဘာလို့ ထည့်သွင်းထားလဲဆိုတာကတော့ သုံးစွဲသူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို သိချင်လို့ပါ။ redirect ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ request က ၂ သောင်း ၄ ထောင် ကျော်သွားပါတယ်။
email ကနေ uni mon နဲ့ imon ကို support လုပ်ဖို့ ပြောထားတဲ့အတွက် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် iMon နဲ့ Uni Mon ကို ဘယ်သူဖန်တီးထားလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ သိသူများ comment မှာ ဖန်တီးသူရဲ့ နာမည် နဲ့ website လေး တချက်လောက် ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ iMon နဲ့ Uni Mon ကို mmwebfonts မှာ ထည့်သွင်းဖို့ ခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ Yunghkio မှာ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေ အကုန်ပါဝင်တဲ့ အတွက် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေကို Unicode နဲ့ သာ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။
- removed iMon font
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged mmwebfonts, myanmar on July 16, 2012 by saturngod. Pirate Apps ?
13 Replies အခုတလော စိတ်ခံစားချက်တွေ တော်တော်လေးများနေတာနဲ့ စာမရေးဖြစ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ် ကျော်ကျော်လောက်က facebook မှာ Pirate ကိစ္စတွေ တော်တော်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ မြန်မာတွေ ရေးထားတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် App ကို pirate လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။
မြန်မာတွေ အတွက် App
မြန်မာတွေ ရေးထားတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် App လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ စျေးကွက် ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး မပြောနဲ့ ပြည်တွင်းက မြို့ကြီးတွေလောက်ပဲ စျေးကွက်ရှိတာပါ။ စျေးကွက် များများစားစား မရှိပါဘူး။
နောက်တချက်က App store ပေါ်မှာ တင်ရောင်းတဲ့ Myanmar App တွေပေါ့။ သူကတော့ စျေးကွက်က နိုင်ငံတကာက မြန်မာတွေ အဓိက ရှိတယ်။ သို့ပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ ရောင်းတဲ့ စျေးလောက်ဆိုရင် ဝယ်မယ့်သူ နည်းသွားပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ App တစ်ခုကို 5000 နဲ့ ဆိုလည်း အသုံးတည့်ရင် ဝယ်တာပဲဗျ။ တနည်းပြောရင် $6 ဝန်းကျင်လောက် သုံးဖို့ ဝန်မလေးကြဘူး။ App store မှာတော့ အများအားဖြင့် $0.99 , $1.99 ဝန်းကျင်တွေလောက်ပဲ ရောင်းလို့ရပါတယ်။ $5 လောက်နဲ့ တင်ရောင်းရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ App Store မှာကတော့ user feed back ကို ချက်ခြင်း ရနိုင်တယ်။
စျေးကွက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတော့ မတူဘူးပေါ့။ အဲဒီလို စျေးကွက်သေးသေးမှာ မြန်မာတွေ အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ရေးတဲ့ App တွေရဲ့ စျေးကွက်က အရမ်းကျယ်ပြန့်တာ မဟုတ်သလို အကျိုးအမြတ်လည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရသွားနိုင်ဖို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။
Online App Store တွေ မှာ ရောင်းချရင်လည်း အနည်းဆုံး $100 ပြည့်မှသာ ၁ လ ကို ၁ ကြီမ် Apple ကနေ ပြန်လွှဲပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် App တွေ ဖန်တီးပြီး ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူလှတဲ့ အလုပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Pirate App တွေနဲ့ ကျွန်တော်
Pirate အခွေတွေဆိုတာကို computer စသုံးကာစက မသိတာ အမှန်ပဲ။ Windows 3.1 ကို သုံးတုန်းက အဲဒီ အထဲမှာ ပါလာတဲ့ game တွေ app တွေ အရန်သင့်ပါလာပြီးသားလို့ ထင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ Windows 95 ရောက်လာတယ်။ Windows 95 ကိုလည်း အသိတစ်ယောက်ကို သွင်းသွားပေးလို့ ဒီအသုံးသုံးလိုက်တာပဲ။ MS Office က Windows မှာ ပါလာတဲ့ အရန်သင့် application လို့တောင် ထင်မှတ်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Windows 98 တုန်းက သူငယ်ချင်းဆီက StarCraft ကို ငှားပြီး သွင်းဆော့ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို အခွေပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ငှားဆော့တာပေါ့။
ပြီးတော့ XP ပေါ့။ XP ရောက်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အခွေတွေ ဝယ်ဝယ်ပြီး သွင်းတတ်နေပြီ။ ၁၀တန်း စာမေးပွဲဖြေပြီးကာစ ဗိုလ်တထောင် ကောလိပ်မှာ Diploma တက်တော့ ဆရာက pirate ခွေတွေ အကြောင်း ရှင်းပြတဲ့ အချိန်မှပဲ ငါတို့ သုံးနေတာ ခိုး သုံးနေတာပါလား ဆိုတာကို သဘောပေါက်တော့တယ်။
သို့ပေမယ့် မူရင်း Application တွေ မဝယ်နိုင်သလို မြန်မာမှာလည်း မဝယ်နိုင်တဲ့ အတွက် Pirate သုံးတာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ယူဆလိုက်တယ်။ First Year ပြီးတော့ ISS မှ​ာ Linux တက်မှပဲ Open Source အကြောင်းတွေ သိတော့တယ်။ Linux ဘာကြောင့် ပေါ်လာရတယ်။ Copyright , CopyLeft စတာတွေ ကို ဖတ်မှပဲ နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။ အဲဒီတုန်းက Linux ဆိုရင် Red Hat ပဲရှိသေးတယ်။ Ubuntu က အခု လို ခေတ်မစားသေးဘူး။ Fedora ကလည်း ထွက်ကာစပဲ ရှိအုန်းမယ်ထင်တယ်။ Red Hat ကို အဓိက သင်တော့ အခြား OS အကြောင်းတွေ သိပ်မသိလိုက်ဘူး။
အဲဒီ အချိန်မှ Pirate ဆိုတာကို နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခွေဆိုင်တိုင်းလိုလို Pirate တွေပဲ ရောင်းချပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ အခွေတွေကိုတော့ Pirate ရောင်းချတာ မတွေ့ရပါဘူး။ အနည်းနဲ့ အများကတော့ ကိုယ့်ပြည်တွင်းထုတ်ကို ခိုးမသုံးဘူးဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေးတွေ ရှိကြပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged myanmar, pirate on June 19, 2012 by saturngod. Post navigation
အထာဆိုသည်မှာ လုပ်နိုင်သောနည်း ဖြစ်နိုင်သောနည်းကို အထာလို့ခေါ်တယ်။ — ရေဆူဆရာတော် Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod